NextMapping | Ọdịnihu nke Ọrụ Blog
Chọọ site Ụbọchị Ụbọchị Họrọ October 12, 2021 September 16, 2021 August 4, 2021 June 7, 2021 Nwere ike 12, 2021 April 13, 2021 March 24, 2021 February 17, 2021 December 14, 2020 November 18, 2020 October 22, 2020 October 8, 2020 August 27, 2020 August 18, 2020 July 7, 2020 Nwere ike 22, 2020 April 21, 2020 April 13, 2020 March 31, 2020 March 25, 2020 March 16, 2020 March 13, 2020 February 11, 2020 February 4, 2020 January 2, 2020 December 19, 2019 November 25, 2019 November 19, 2019 November 14, 2019 November 4, 2019 October 24, 2019 October 6, 2019 September 18, 2019 September 5, 2019 August 29, 2019 August 17, 2019 July 23, 2019 July 4, 2019 July 2, 2019 June 21, 2019 June 14, 2019 Nwere ike 27, 2019 Nwere ike 6, 2019 April 23, 2019 April 11, 2019 March 25, 2019 March 12, 2019 March 11, 2019 February 28, 2019 February 14, 2019 February 5, 2019 January 29, 2019 January 15, 2019 January 3, 2019 December 5, 2018 December 3, 2018 November 20, 2018 November 6, 2018 October 30, 2018 October 14, 2018 September 29, 2018 September 19, 2018 September 12, 2018 September 5, 2018 August 27, 2018 August 17, 2018 August 1, 2018 July 26, 2018 July 23, 2018 July 11, 2018 July 9, 2018 June 28, 2018 Nwere ike 21, 2018 April 26, 2018 April 11, 2018 March 20, 2018 February 28, 2018 February 20, 2018 January 31, 2018 January 9, 2018 January 3, 2018 December 11, 2017 December 4, 2017 November 11, 2017 October 23, 2017 October 16, 2017 September 12, 2017 September 7, 2017 August 25, 2017 July 26, 2017 July 19, 2017 June 15, 2017 June 7, 2017 Nwere ike 23, 2017 Nwere ike 4, 2017 Nwere ike 2, 2017 April 18, 2017 April 5, 2017 March 21, 2017 March 10, 2017 March 1, 2017 February 20, 2017 February 7, 2017 January 17, 2017 January 6, 2017 December 14, 2016 December 9, 2016 November 21, 2016 November 16, 2016 October 28, 2016 October 12, 2016 October 3, 2016 September 23, 2016 September 14, 2016 August 22, 2016 August 12, 2016 July 19, 2016 June 28, 2016 June 22, 2016 June 13, 2016 Nwere ike 17, 2016 Nwere ike 12, 2016 Nwere ike 2, 2016 April 25, 2016 April 7, 2016 March 29, 2016 March 14, 2016 March 12, 2016 February 10, 2016 January 19, 2016 January 17, 2016 December 29, 2015 December 13, 2015 December 8, 2015 November 27, 2015 November 23, 2015 November 19, 2015 November 9, 2015 October 14, 2015 September 16, 2015 August 28, 2015 August 14, 2015 August 6, 2015 July 27, 2015 July 15, 2015 June 10, 2015 Nwere ike 11, 2015 April 1, 2015 March 23, 2015 March 11, 2015 February 8, 2015 February 3, 2015 January 18, 2015 December 23, 2014 December 8, 2014 October 29, 2014 October 24, 2014 October 8, 2014 October 3, 2014 September 9, 2014 September 4, 2014 August 29, 2014 August 28, 2014 August 27, 2014 June 25, 2014 June 12, 2014 Nwere ike 25, 2014 Nwere ike 16, 2014 Nwere ike 15, 2014 Nwere ike 13, 2014 Nwere ike 8, 2014 April 24, 2014 April 17, 2014 April 14, 2014 April 11, 2014 March 28, 2014 March 19, 2014 February 27, 2014 February 20, 2014 February 4, 2014 February 3, 2014 January 16, 2014 December 6, 2013 November 14, 2013 November 8, 2013 September 19, 2013 September 16, 2013 September 5, 2013 August 22, 2013 August 18, 2013 July 20, 2013 Nwere ike 20, 2013 April 20, 2013 March 20, 2013 February 20, 2013 January 20, 2013 December 23, 2012 December 20, 2012 November 23, 2012 November 20, 2012 October 20, 2012 September 20, 2012 August 20, 2012 July 23, 2012 July 20, 2012 June 20, 2012 Nwere ike 20, 2012 April 20, 2012 March 20, 2012 March 3, 2012 February 23, 2012 February 20, 2012 January 28, 2012 January 23, 2012 January 21, 2012 January 20, 2012 January 19, 2012 December 22, 2011 December 20, 2011 November 20, 2011 October 20, 2011 September 20, 2011 August 20, 2011 July 20, 2011 June 20, 2011 Nwere ike 20, 2011 March 20, 2011
Chọọ site Category Họrọ AtiyaEbe ọrụ 1 nke nhọrọMmepụta 3Nkeji edemedeBlog kacha mmablogBusinessOnye Nzere CEOndu ochichinjikwa mgbanweGbanwee njikwa maka ọgbọBusiness ConsciousIdu NdúỌdịnihu nke ỌrụGen Y's gburugburu ụwaỌgbọ XỌgbọ YỌgbọ na teknụzụỌgbọ n’ebe ọrụInno na okike na ebe oruInno na Ebe OruNmekorita teknụzụ na Nkwukọrịta iji wepu ikike mmadụOnye NdumoduOdu NduNdụmọdụ ndị isiIbute Ebe Ọrụ Na-agbanweIbute Ebe Ọrụ MultigenerationalNa-eduga n'ọgbọMediangbanwe nhaziNlere nke UsoroEbe ọrụ 2020TrendingUncategorizedNweta nkwalite ndu gị OS
-adịbeghị anya posts
Vidiyo ebe ọrụ ngwakọ
Ngwakọ ọrụ ngwakọ nọ ebe a ka ọ nọrọ ebe a bụ vidiyo ọhụrụ ngwakọ ebe ọrụ anyị. Mgbe a na -ekwu maka ngwakọ ngwakọ ọ bụghị otu nha dabara niile. Enweghị otu ụzọ nzukọ ga -esi eme ngwakọ. Companiesfọdụ ụlọ ọrụ na -ewepụta ngwakọ ebe ndị ọrụ niile ga -anọrịrị n'ọfịs otu ma ọ bụ […]
Ọ bụrụ na enwere otu ihe dị n'uche ndị ọrụ - ọkachasị ndị isi, ọ bụ otu a ga -esi belata nchekasị n'ebe ọrụ ngwakọ. Imirikiti ụlọ ọrụ na -eme atụmatụ ịlaghachi ọrụ maka ndị ọrụ ha malite n'October 2021. Ụdị ngwakọ anyị na -ahụ dị ka ihe a na -ahụkarị ugbu a bụ 'ụzọ ọrụ mgbanwe'. Mgbanwe […]
Nnyocha na -ekwu! Ihe ndị ọrụ chọrọ mgbe ha laghachiri n'ọfịs
Na NextMapping anyị zigara ndị debanyere aha akwụkwọ akụkọ anyị nyocha emere na June 2021 na -ajụ ha ihe ha chere gbasara ngwakọ ngwakọ na ihe ha chọrọ mgbe ha laghachiri n'ọfịs. E zipụrụ nyocha ahụ tupu mmụba kachasị ọhụrụ nke ụdị COVID Delta na mgbe ọtụtụ azụmaahịa na -eme atụmatụ ịga […]
Ndị na-eduga ndị ngwakọ
Otu n'ime ihe ịma aka kasịnụ nke ndị isi nweworo kemgbe ọgba aghara a na-efe efe bụ 'na-eduga ndị ngwakọ ngwakọ'. Bụ onye ndu tupu ọrịa a ka ọdịnala na ndị isi nwere ndị ọrụ na-arụ ọrụ n'ọfịs. Mgbe oria ojoo a mere ka o di elu oru nke oru nke 'oru di omimi'. Tupu ọrịa a otutu ọtụtụ ụlọ ọrụ kwuru […]
Ndi Ochichi Ndi Nchoputa Ndi mmadu di nkpa iji mee ka ndi mmadu tinye aka
Anyị nyochara ihe karịrị ndị ọrụ 1000 wee jụọ ha "Kedu nka ị chere ndị isi gị kwesịrị ịnwe ka ị tinye aka gị?" Ihe karịrị 94% nke ndị a nyochara kwuru na ha chere na ndị isi chọrọ nka dị mkpa nke mmadụ (nke a makwaara dị ka nka dị nro) iji mee ka ndị otu na-emekọ ihe N'oge gara aga, the word that used to […]
Emana Covid Na Ọdịnihu
Generation Covid na ọdịnihu …… E nwere ọgbọ ọhụrụ n’obodo - Generation Covid a makwaara dị ka Gen C. nke gụnyere ndị na-eto eto n’okpuru afọ iri abụọ. O nwere ike ịbụ na ị ga-ama ọgbọ ndị ọzọ: Gen Z 1997 ruo 2020 (mara maka ịbụ ọgbọ mgbasa ozi mmekọrịta) Millenials 1981 to 1996 (mara […]
5 Nduzi-ndu ndi mmadu duuru site na oria ojoo a
N'ime ọnwa ole na ole gara aga, anyị mere nnyocha nke ndị isi sitere n'ọtụtụ ụlọ ọrụ banyere nkuzi nduzi ha metụtara ọrịa na-efe efe. Ihe anyị nụrụ n'oge ndị ndu bụ na enweela ọtụtụ mmụta site na 2020 wee banye na 2021. leadersfọdụ ndị isi achọghịdị iche maka ihe mmuta ha mụtara n'ihi
Anyị emeela ọtụtụ nyocha nke ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ ma chịkọta omume kacha mma nke ndị ọrụ dịpụrụ adịpụ. N'ọtụtụ ụzọ enwere nkwekọrịta n'ozuzu na mgbe 2020 gafere, a ga-enwe echiche nke ịlaghachi 'nkịtị'. Ihe ọ bụla nkịtị bụ taa ụkpụrụ o doro anya na e nwere ihe ọhụrụ nkịtị […]
21 Osote azọ ọrụ kprụ Ọrụ na-agbanwe maka 2021
N'afọ a, anyị kesara usoro ọrụ 21 NextMapping Ọrụ nke 2021 site na slideshare. Covid19 na 2020 nwere mmetụta n'ụzọ anyị si arụ ọrụ na otu anyị si ebi ndụ. Anyị nọ na mmalite nke mgbanwe mmekọrịta ọha na eze nke anyị ga-ahụ n'ihi ọrịa na-efe ụwa.
Lee ihe ị ga - ele anya na 2021
Nke a bụ ihe ị ga-atụ anya ya na 2021. Na 2020 ụwa gbanwere nke ọma - otu anyị si arụ ọrụ - ụzọ anyị si ebi ndụ na otu anyị si ele anya n'ọdịnihu. Na 2020 anyị niile ga-ekwenye na anyị niile nwere nsogbu nrụgide. Bebụ mmadụ bụ inwe nrụgide. Ihe […]
Ọrụ Anyị Nọ na Ọrịa Na-efe Ọrịa Bụ Ọbara Ọbara Ndị Mmadụ
Ndi 2020 agbapuwo gi n'ime ihe ị maara? Nke a bụ echiche m banyere etu mụ / anyị ga-esi lekwasị anya na mmadụ nkịtị anyị n'oge ọrịa na-efe efe. Amaghị m maka gị mana 2020 abụrụla nnukwu ụkwụ na oche nke uwe ogologo ọkpa. Ọ dị ka a ga - asị na nchekasị nke ọrịa a agbasala ọtụtụ […]
Ebe Ọrụ Ọdịnihu Bụ Ngwakọ nke Remote na Na Ndị Ọrụ Ọfịs
Anyị anụla ọtụtụ okwu gbasara 'ihe ọhụrụ' kemgbe mmalite nke ọrịa a. N'ezie, ọ dịghị onye maara n'ezie ụdị ọhụụ ọhụrụ ahụ ga-adị. Ugbu a, anyị na-agagharị mgbanwe mmekọrịta ọha na eze. Ọrịa ahụ na-efe efe na-eme ka ndị ọrụ tụleghachi ihe ọrụ ha pụtara n'otu n'otu. N'ọrụ agbanweela […]
Insurance Case Study: Wzọ 5 Na-arụ Ọrụ Remotely
Insurance Case Study: Wzọ 5 Arụ Ọrụ Remotely Ọbịa post site Crystal Metz - Crystal bụkwa a gbaara ezi àmà NextMapping entrepreneur Coach na-arụ ọrụ na oru buu igba n'ulo na-succesfully maapụ si ihe na-esote ka ukwuu ịga nke ọma. Na-arụ ọrụ remotely, ma ọ bụ na-agba ọsọ gị azụmahịa, ijikwa ọrụ na-edebe ndị ahịa obi ụtọ n'ụlọ, pụrụ ịbụ a bit tricky ikwu […]
5 Usoro iduzi Onye Nduzi maka Nsogbu WFH (Ọrụ Site na Home)
Na nke a blog post m na-ekerịta 5 ndu hacks maka nsogbu WFH kachasị arụ ọrụ (ọrụ site na ụlọ). Na oku mbugharị nso nso a na onye isi ụlọ ọrụ anyị tụlere ihe ndị na-edebe ya na ndị isi ya n'abalị n'oge ọrịa ahụ. Ihe ịma aka ndị ya na ndị isi ya na-eche ihu bụ ndị yiri nnọọ nke [
Enwere ụzọ 8 ndị isi nwere ike ịkwado ndị ọrụ ha ka ha na-eme nke ọma n'oge enweghị mgbagwoju anya. N'oge na-adịbeghị anya onye ahịa kesara na ọ na-agbasi mgba ike ime ka ndị otu ya na-etinye aka. O kesara na ndị ọrụ ya nwere nsogbu site n'ịnọgide na-elekwasị anya yana na-arụpụta ihe. Enweghị akwụkwọ ọgụgụ maka ịga nke ọma na-emeso ihe niile […]
Ọdịnihu nke Ọrụ na Ike nke ika
N'oge na-adịbeghị anya, abụ m onye ọbịa na usoro Zync ụlọ ọrụ Podcast na-ekwu okwu banyere ọdịnihu nke ọrụ na ike nke ika.
Otu ndị isi na-esi eduga n’iwu na mkpesa-19
Ternyaahụ, a jụrụ m ka ndị isi na-ebili ibute ọgbaghara Covid-19.
N’etiti Coronavirus - Kedu ka ị na-eche n’ọdịnihu?
Anyị gwa a nnyocha e mere ka ọha na eze na-arịọ - “amidst the coronavirus how are you feeling about the future? Data a ka na-abata ma ozugbo i mechara nyocha ahụ ị ga-ahụ nsonaazụ ya. N'okpuru ebe anyị na-ekerịta azịza nke mbido. Ajụjụ ndị anyị jụrụ gụnyere: you na-enwe nchekwube banyere […]
Coronavirus Na -ekwu Egwu Maka Ọrụ Ọdịnihu
Ndị ọdịniihu niile na-ekwu maka ọgba aghara na ịdị njikere maka ọgba aghara - otu ọgba aghara anyị maara nke ọma bụ na Coronavirus na-agba ọsọ n'ọdịnihu ọrụ. Dị ka ndị mmadụ imeghari na-arụ ọrụ remotely, nsogbu ndị ọhụrụ apụtawo na ọhụrụ aku ohere ga-ebilite The iju mmiri nke ozi na coronavirus bụ akarị na kwa ụbọchị […]
Ihe omumu ohuru ohuru - otu esi emeputa & ohuru ohuru na ngbanwe nke mgbanwe
Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịgbakwunye usoro ntanetị ọhụụ - "Otu esi emepụta & ihe ọhụụ na ọsọ nke mgbanwe". N'ọnwa Febụwarị anyị gbakwunyere, "Ọdịnihu nke ịnakọta ma na-ejigide onyinye kacha elu" n'ịntanetị. Ọhụrụ anyị N'ezie, "Olee otú Mepụta na imepụta na ọsọ nke Change" bụ iji nyere ndị isi, ndị otu aka, […]
Rrị elu nke Ọrụ Remote na 2020 - Otu esi eme ka ịga nke ọma na ụlọ ọrụ gị
Ka m na-ede ihe a anyị nọ na etiti ọrịa coronavirus. Anyị nọ na ịrị elu nke ọrụ dịpụrụ adịpụ na 2020. Schoolslọ akwụkwọ mechiri emechi, ụlọ nri na-emechi ma ọ bụ nwee ọrụ gbanwere iji wepụta naanị, ndị na-ere ahịa dịka Apple nwere ụlọ ahịa emechiri emechi na ụlọ ọrụ ọ bụla nwere nnukwu nsogbu a. Afọ 5 […]
Jiri ụdị PREDICT iji wepụta nchekasị maka ọdịnihu
Anyị nọ n'oké nsogbu ọrịa Covid-19 na onye ọ bụla na-echegbu onwe ya, onye ọ bụla na-enwe mmetụta nke kpuchiri ihu na mmetụta nke akụ na ụba ụwa. Anyị nwere ike iji ngwa ọrụ dịka usoro PREDICT iji nyere aka belata nchegbu banyere ọdịnihu. Kwa ụlọ ọrụ na-impacted gụnyere ndị njem ụlọ ọrụ, nzukọ ụlọ ọrụ, na ọkọnọ […]
Jason Campbell nke MindValley gbara Cheryl Cran ajụjụ ọnụ na 'nduzi onwe onye' dị mkpa iji mepụta ọdịnihu. Iji na-ege ntị zuru audio nke Ajụjụ ọnụ na-aga ebe a. Jason: Enwere m Cheryl Cran ebe a, nke, Oh my gosh, anyị ga-enwe ọgwụgwọ dị otú a na-ekwu maka ọdịnihu nke ọrụ yana na ọdịnihu bụ […]
Ọdịnihu nke Ahụmịhe Ndị Ahịa
Kedu ihe ga-eme n'ọdịnihu nke ahụmịhe ndị ahịa? Afọ ole na ole gara aga, mụ na ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ na-arụ ọrụ na-etinye maka nzukọ ndị ahịa na-enwe ekele. Ihe nzukọ ahụ lekwasịrị anya bụ inye ndị ahịa ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ ọrụ na akụrụngwa ọhụrụ iji nweta teknụzụ ha. M gwara keynote maka ihe ndị a na […]
2020 Afọ ịkụ nzọ nke Onwe anyị
Ọ bụ mmalite nke afọ iri ọhụrụ NA 2020 bụ afọ nke ka mma anyị. Oge eruola ka onye ọ bụla n’ime anyị mụbaa nkwa anyị nke ịbụ ezigbo mmadụ, ị ga-abụ ndị otu egwuregwu kacha mma, na ndị ndu kacha mma. You nwere ike ịhụ ịdị ngwa nke ya? You nwere ike ịnwe mmetụ nke ọdịnihu na-arịọ anyị ka […]
Ememe 2019 na NextMapping
Anyị na-eme emume ebe a na NextMapping ka afọ 2019 na-abịa na njedebe. Na 2019 akwụkwọ m, "NextMapping - Anticipate, Navigate and Create the Future of Work" NA mepụtara mbipụta nke abụọ na akwụkwọ ọrụ onwe onye nke a ga-ebipụta na February 2. Ndị ahịa anyị na-ahụ maka ịba ụba mụbara ihe ịga nke ọma ha na 2020 site na ịnakwere ndị isi na-akọrọ. Na […]
Digital, Change na PREDICT Model Chris Rainey Ajụjụ ọnụ Cheryl Cran
Taa enwere m obi ụtọ ịbụ onye Chris Rainey guzobere HRleaders.com gbara ajụjụ ọnụ banyere ọdịnihu nke ọrụ, dijitalụ, mgbanwe na ụdị PREDICT site na akwụkwọ m, "NextMapping - Anticipate, Navigate and Create the Future of Work". Ajụjụ ọnụ e lekwasịrị anya gburugburu ngwa-ngwa-agbanwe n'ọdịnihu na otú ndị isi nwere ike leverage na PREDICT nlereanya ka […]
Etu ị ga-esi mee ka ndị ọrụ tinye aka
Na NextMapping anyị nyochara ọtụtụ puku ndị isi na otu n'ime nsogbu ndị kachasị na-eche ndị isi ihu bụ "otu esi eme ka ndị ọrụ tinye aka". N’oge na-adịbeghị anya, emere m usoro agụmakwụkwọ dị iche iche maka BMO Bank nke Montreal n’ofe Canada. Anyị gara Winnipeg, Calgary, Edmonton, Vancouver, Montreal, na Toronto. E lekwasịrị anya na ọdịnihu nke ọrụ […]
Otu n'ime Trends maka Ọdịnihu nke Ọrụ 2020
N'oge na-adịbeghị anya anyị wepụtara akụkọ emelitere anyị na Top 20 Trends for Future of Work 2020. Isiokwu a lekwasịrị anya n'otu n'ime ọnọdụ maka ọdịnihu ọrụ 2020. Otu n'ime ọnọdụ ndị anyị mere nyocha gụnyere itinye uche na mgbanwe dijitalụ site na anya nke 'ndị mmadụ mbụ '. Ọtụtụ ndị isi anyị nyochaworo ekwuola […]
Etu aga - esi kwụsị ịse nkọ na ebe ọrụ
Anyị enyochala ọtụtụ puku ndị isi na otu n'ime nsogbu ndị kachasị egosi bụ: Otu esi akwụsị inwe obi abụọ n'ebe ọrụ. Na-esoteMapping Ọnọdụ ngbanwe nke mgbanwe na teknụzụ na azụmaahịa na-eme ka o sie ike ịhapụ ndị ọrụ itinye aka n'ọdịnihu. Ọrụ na-aka na-aga n'ihu mgbanwe na-adịghị atụkwasị obi ndị ndú ha […]
Enweghịzi “Nro Nro”?
Okwu a bu “okwu di nro” putara adighi ike ma obu na ogaghi adi nkpa ma m si, 'Odighizi nkpa! Anọ m na ozi! Anọla m na ọrụ a ihe karịrị afọ iri! Enwere m olileanya na ị ga-esonyere m. Ndị ozi bụ nwere okwu ahụ "nro nkà" dochie na okwu ọhụrụ dị ka "mkpa […]
Buo amụma banyere ọdịnihu Site na idobe usoro
Enweghị kristal kristal mana enwere ihe nzuzo nke ndị ọhụụ maara - ị nwere ike ịkọ ọdịnihu site na itinye usoro. Ọ bụ Abraham Lincoln kwuru, "ụzọ kachasị mma iji kwuo ihe ga-eme n'ọdịnihu bụ ike ya". Na NextMapping anyị na-enyere gị aka ịkọ ọdịnihu site na itinye ego usoro. N'akwụkwọ m, “NextMapping - Anticipate, […]
Nnukwu mgbanwe a ga --eme Ọdịnihu nke Ọrụ
M na-ede ihe a site na ọdụ ụgbọ elu Minneapolis ebe m dechara usoro isi okwu maka ndị ahịa na ụlọ ọrụ na-ebugharị ndị ọrụ, ndị ahịa na ụlọ ọrụ nchekwa na ndị ahịa na gọọmentị etiti. Ọ bụ ezie na onye ọ bụla n'ime ndị a ọrụ nwere ike iyi disparate na unalike eziokwu bụ na ọ bụla otu ụlọ ọrụ pụrụ iche nwere commonalities na […]
O doro anya na ndị ga-arụ ọrụ n'ọdịnihu ga-abụ ndị ọrụ na-agbanwe agbanwe. Ndị ọrụ ga-eme n'ọdịnihu ga-adị iche karịa nke taa. Ọtụtụ ọnọdụ na-arụtụ aka na mgbanwe na-emetụta ọdịnihu ebe ọrụ. N'akwụkwọ m, “NextMapping - Anticipate, Navigate and Create the Future […]
Ọdịnihu chọrọ ndị ndu nwere àgwà nwoke na nwanyị
Ọdịnihu chọrọ ndị isi nwere omume nwoke na nwanyị. Anyị nọ n'oge na ebe dị ezigbo mkpa n'ụwa. Kwa ụbọchị, anyị na-ahụ ihe atụ dị ukwuu nke na ọ bụghị nke ukwuu nke ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, ma na ụlọ ọrụ, mmalite ma ọ bụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ndu ndú na n'oge gara aga na-abụkarị ụmụ nwoke na […]
Ndị Gị Hà Na-atụkwasị Ndị Isi Ha Obi?
Enwere m ajụjụ: Ndị gị ọ tụkwasịrị ndị isi ha obi? Ọ bụrụ na ị zara ee - nke ahụ dị mma ụlọ ọrụ gị dị njikere n'ọdịnihu! Enwere nyocha sayensị kwadoro nke gosipụtara na ọdịbendị ntụkwasị obi nwere njikọ dị elu na uru ndị ọzọ. Paul J. Zak a Harvard nyochara nyochara mmekọrịta dị n'etiti ntụkwasị obi, onye ndu na […]
Inshọransị Oche Ọrụ 2025
Ọtụtụ ụlọ ọrụ gụnyere mkpuchi na-agbanwe ngwa ngwa na ọtụtụ mgbanwe na-emetụta mkpuchi ọrụ ebe ọdịnihu 2025. AI, akpaaka, robotik, mgbanwe ndị ọrụ na-agbanwe ngwa ngwa na-emetụta ọdịnihu nke mkpuchi. Ọ dị mkpa ka ndị isi nwee nkwalite ikike dịka ikike inwe ọtụtụ echiche. Ndu ndú kwesịrị inwe ike na-edu […]
Etu aga - esi dịrị n’ọdịnihu - Ajụjụ ọnụ nke Amber Mac
Cheryl Cran: Enwere m obi anụrị taa, ka Amber Mac bụrụ ọbịa anyị. Amber biko kọọrọ ndị ahịa anyị ihe ndabere gị. Amber Mac: Daalụ, Ana m arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20 ugbu a na ụlọ ọrụ teknụzụ. Amalitere m ịbanye na ahịhịa na mmalite nke teknụzụ dị na San Francisco. Enwere m ọrụ nta akụkọ […]
Etu esi eme mgbanwe na oge oge ọkụ
Na-inundated na oke mgbanwe? Sonye ọgbakọ! Anyị nọ n'oge ebe ọ dị oke mkpa na anyị niile ga-akawanye mma n'ịmụta otu esi agbanwe agbanwe n'oge mgbanwe. Nkọwa nke 'Flex': To move or sense Definition of 'flux': Synonym for 'Change' Ọsọ mgbanwe na ozi anyị na-eme […]
1 2 ... 74 Ọzọ>